Ukulandela i-backlinks kuya kubonakala njani ngo-2018?
Njengeenjini zokukhangela ziqhubeka ziguqula izilungiso zazo zendawo kunye nokubonelela ngokutsha kokuhlaziywa kwendawo, abaninzi be-webmasters bazibuza ukuba ngaba kufuneka batyalole ekwakheni i-backlinks, okanye. Ekukhanyeni kokuhlaziywa kweGoogle Penguin kunye ne-Panda, abanikazi bewebhusayithi abanokungabaza malunga negunya lokulandela izixhumanisi ezingenayo ngo-2018. Eli nqaku lenzelwe ukukhupha zonke iingcamango eziphosakeleyo malunga namandla ase-backlink kwaye zifundise indlela yokwakha i-backlinks esemgangathweni kulo nyaka nangonyaka ozayo.
I-backlink phambi kweenjini zokukhangela
Ukususela ekuqaleni kweengxelo zeenjini zophando, i-backlink ibe yinxalenye ebalulekileyo yeziqulatho zabo. Okokuqala, bakhonza ukufumana umxholo omtsha kwaye babale igunya loxwebhu. Nangona kunjalo, ekuqaleni, i-Google ihlolisise kuphela inani le-backlink ngaphandle kokungaqwalasela umgangatho wemithombo evela kuyo. Izikhokelo ezingakumbi umthombo wewebhu ufumene, igunya eliphakamileyo layo liya kuba emehlweni eenjini zokukhangela. Okwangoku, i-backlink isetyenziswe ekufumaneni umxholo omtsha okanye ohlaziyiweyo kunye nokubeka phambili ukukhwela.
Ukuthintela yonke imisebenzi yogaxekile kunye nemithetho ye-injini yokuphambuka, i-Google imise izikhokelo ze-Webmaster Guidelines zibandakanya ezifanelekileyo zokuqulunqa. Le mithetho ayitshintshi ixesha elide. Sekunjalo, nayiphi na imisebenzi ye-webmaster ejoliswe ekusebenziseni izikhundla zeendawo zifanelwe ukuhlawuliswa neentetho ezinzima zeGoogle.
Ngokuphucuka kwe-injini yokucwangcisa injini, amabhizinisi amaninzi afuna iindlela ezahlukeneyo zokufumana i-backlinks. I-Webmasters bazama ukufumana iifutshane ezifumanekayo zokufumana izikhundla eziphezulu kwi-Google SERP. Ngenxa yoko, iiwebhsayithi ezingafanelanga ukuphakamisa izikhundla eziphezulu zifumene izikhundla eziphezulu zeGoogle ngokubandakanya ukuphulwa kwe-Google Webmaster Guidelines. Yayisungula ukuqala kokuthengiswa kwekhonkco enkulu kunye nokuthenga umkhankaso kwiimarike zedijithali. Ngenxa yoko, ishishini lokuphucula injini yosesho liphule iindlela ezithile zokwakha izixhobo, ezifana nokuthumela abavakalisi, ukushicilelwa kweendaba, ukuthengiswa kwinqaku, ukuvakalisa ibhulogi, izithuba zoononophelo zoluntu, izithuba zeforum, njl.
Okwangoku, i-Google ifuna ukuba i-backlink iqinisekiswe ngumnikazi wesayithi okanye ingadluli PageRank.
Ngo-2012, i-Google yasungula i-algorithm yayo ye-Penguin, ngokubhekiselele kuyo yonke i-backlinks ye-spammy eyahluzwayo kwaye iiwebhsayithi ezazidala zajeziswa. Ngaloo nyaka unyaka weGoogle wadala ithuluzi le-disavow kwi-Google Search Console ukwenzela ukuba abanini bewebhu bakwazi ukulahla izikhonkwane zabo eziphambili ze-spammy ngokuklikha.
Njengoko unokubona kwasekuqaleni, imbono yeGoogle yombono ikhuselwe ukukhusela izalathisi ukwenzela ukwandisa izinga kwiinjinjini zophando. Abaninzi be-webmasters abangenamava baye bahumusha ngokungafanelekileyo lo mgaqo-nkqubo, kunye nezohlwayo zekhonkco ezibangelwa kulo mgaqo-nkqubo ngokuthi "i-Google inxamnye nesakhiwo soqhagamshelwano okanye isakhiwo sekhonkco ayifanelekanga ukutyalomali". Ukuhlenga izinto, i-Google ayixhatshali kwi-backlinks. Ngokuphambene noko, i-Google isebenzisa i-backlink njenge-criterion yohlobo lweminye imigaqo engama-200. Nangona kunjalo, i-Google isebenza kanzima ukuphucula amava okukhangela abasebenzisi. Yingakho i-Google iqhubeka imzabalazo ngokuchasene nokusetyenzwa kwee-website ukuze ifune iiwebhusayithi ezixabisekileyo ezichaphazelekayo kumxholo wazo Source .